5.1 Turjumidda iyo barashada garaafyada
Garaaf waxaa loo isticmaalaa in lagu caddeeyo akhbaar iyo xog dhab ah ee la soo uruuriyey. Xitaa waxaaba dhacda in loo isticmaalo in dadka lagu wareeriyo iyadoo lagu soo bandhigayo wax been ah iyadoo laga dhigayo in ay ka turjumeyso xaalad dhab ah, iyadoo laga leeyahay in lagu gaaro ujeeddo gaar ah oo lagu daneeysanaayo.
Laba dukaan ayaa waxa u dhexeeya tartan ay ku soo jiidanayaan macaamiisha iyo dadka wax ka gata. Markaa labadii dukaanka waxay jebiyeen qiimaha caanaha, waxayna ku soo saareen aqbaartaas xaashida iidhehda.
Dukaan qiimaha jaban ee Deeqa
Bal aan soo qaadano tusaale kale:
Yeeyda tiradeeda ayaa soo kordhay sanadihii ugu dambeeyey dalkaan Iswiidhan. Iyadoo taasi jirto ayaa waxaa la ogyahay iney jiraan dad badan oo ka soo horjeeda tirada yeeyda oo sii badaneysa iyo kuwa doonaaya in tirada yeeyda ay badato. Halkaan hoose waxaan ku arkeynaa garaaf na tusaaya sida ay tirada yeeyda ay u soo kordheeysey intii u dhaxeeysay sanadihii 1987–2000.
Bal ka dhig inaadan doonaynin inay badato tirada yeeyda, isla markaana u arkaaya in wadankaan Iswiidhan uusan waqtigan diyaar u ahayn kororsiimada badan ee yeeyda. Sheeg garaafyada hoose midka na xukuma oo na tusi kara oo kala ah A iyo B ?
Tani waa tusaale caddeynaaya sida garaafka wax loogu qaldi karo oo xaalad dhab loogu turjumi karo si ka duwan sidey aheyd. Labada garaaf midkood ayaa waxaa uu sii xoojinayaa fikrada dhaheyso in tirada yeeydu ay aad u kordhi doonto, halka kan kale uu taageerayo fikrad ka duwan taas oo ah in tirada yeeydu ay aad isku dhimi doonto.